B2B Proiling and Prospecting with Mintigo | Martech Zone
Tọzdee, Machị 1, 2012 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Mgbe m hapụsịrị ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ, ọrụ mbụ m nwere bụ ịmepụta ebe nchekwa data nke ndị na-ere B2B. N'iji ụfọdụ ngwa ọrụ nke atọ, anyị mepụtara ụzọ iji mepụta ndeksi aha njirimara na njirimara siri ike na ndị ahịa gị. N'aka ozo, anyi ga - amata ezigbo ndi ahia gi site na nbata, onu ogugu ndi oru, Koodu ndi ulo oru, otutu oru, onodu ya na ozi ndi ozo anyi nwere ike ichota.
Ozugbo anyị matara otu onye ahịa dị, anyị ga-eji profaịlụ ndị ahụ wee gụọ ọdụ data na-atụ anya ya. Didn'tkwesighi ị wepụta egwuregwu, ihe niile ị ga - eme bụ ịdepụta ndepụta atụmanya n'usoro… onye dịkarịrị anya dịka ndị ahịa gị na ndị na - ele ndị ahịa gị anya. Ọ dị ntakịrị karịa mgbagwoju anya ebe ọ bụ na ndeksi na isi webata ọtụtụ indexes… mana ndị ahụ bụ isi.
Ọ na-egosi ndị folks nke Mintigo ewerela usoro a, tinye ya na weebụ, ma tinye ya na steroid!
The Mintigo saịtị depụtara 5 ihe na-ahu nagide ọrụ ha:
Iru ndị na-ege ntị ziri ezi - Ozi zuru oke na nke ziri ezi na ma ndị mmadụ ma ụlọ ọrụ na-enye gị ohere ịgafe ndị nche ọnụ ụzọ ámá ma jikọọ na ndị na-eme mkpebi, meziwanye pipeline, ọnụego mmechi, na usoro ahịa.
Akwado Pipeline arụmọrụ - More Mintigo na-eduga n'ịgbanwe karịa site na isi mmalite ndị ọzọ, ihe ruru 70% ahịa ndị ọzọ kwa ụbọchị, dị ka nyocha ndị ahịa Mintigo.
Mfe, Eburu Amụma Lead Flow - Ọ na-ewe gị nkeji ise iji mejupụta ikike ndu kwa ọnwa - ka Mintigo mee ihe dị arọ maka gị site na iji ụzọ amụma Mintigo gosipụtara. Ndị ọrụ ahịa gị nwere ike ịhazi ihe na-eduga ngwa ngwa na ntụkwasị obi na pipeline ha ga-ejupụta mgbe niile.
Mbelata Oge Ntughari - Mintigo gbakwunyere nghọta na kọntaktị ọ bụla n'ihi na ndu ọ bụla kwekọrọ na profaịlụ nke onye na-azụ ahịa kachasị elu. Mintigo gosipụtara nke ọma na-eduga ndị otu ahịa ozi ha chọrọ maka ịhazi akaụntụ bara uru ma hapụ ndị ahịa ahịa ka ha zube ebumnuche maka mkpọsa nkewa.
Mepụta Osimiri Ego Ọhụrụ - Mintigo kpughere ikike ahịa zoro ezo site na inyocha ihe karịrị ụlọ ọrụ 10 nde na-atụ anya ya, na-achọta ndị kwekọrọ na-adabere na njirimara miri emi, karịa naanị ozi ụlọ ọrụ dị mfe. Ndị ahịa achọpụtala na ihe ruru 90% nke Mintigo na-eduga ha bụ ọhụụ nye ha - ọbụlagodi n'ahịa ha enyochagoro nke ọma site na iji ndepụta.
Ekele dị ukwuu nye enyi na onye ahịa Isaac Pellerin, Revenue Marketing Manager na TinderBox, maka ịtụrụ m ọrụ a. Tinderbox bụ ahịa amaghị software nke ahụ na-eme ka ọ dịrị gị mfe ịmepụta, dezie ma soro amụma ahịa. Anyị na-eji ya ma anyị hụrụ ya n'anya!
Tags: b2bb2b ndu ọgbọatụmanya b2bb2b isimintigo
Ndepu ikike maka WordPress